Warwar Lasoo Darsay Xaaska Barack Obama | Gaaroodi News
Warwar Lasoo Darsay Xaaska Barack Obama
Marwadii hore ee koowaad ee dalka Mareykanka, Michelle Obama ayaa sheegtay inay la soo gudboonaatay xaalad niyad jab ama walwal aan sidaas u darneyn.
Dhibaatadan ayay sheegtay inay tahay mid ka dhalatay xaaladda feyraska corona, cadaalad darrida ku saleysan midabka ee ka jirta Mareykanka iyo wax ay ugu yeertay “munaafuqnimada” maamulka madaxweyne Donald Trump.
Waxaa ay sheegtay in xooga caqabad ay la soo gudboonaatay xaladeeda noolaleed, gaar ahaan huradada.
“Waxaan soo kacaa habeenkii xilli dambe, sababtuna waxa weeye in aan ka walwalayo wax culeys igu hayo”, ayay tiri.
Arrimahan ayay kaga hadashay wareysi ay siisay weriye u dhashay dalka Mareykanka.
” Ma ahan oo keliya in aan ka walwalsanahay xayiraadda dhanka socdaalka ee feyraska corona ee sidoo kale waxaan ka niyad jabsanahay dhibaatada midabka ku saleysan oo maamulka madaxweyne Trump uu indhaha ka daawanaya har iyo habeen, waana waxa sii murjineysa walwalka aan qabo”ayay hadalkeeda sii raacisay.
Waxay u muuqatay inay dhibsatay dhibaatada ay la kulmayaan dadka madowga ah, waxayna tiri “In mar walba aan aragno qof madow ah oo la bahdilay, eedeyn aan jirinna dusha loo saarinayo waa waxyaabaha walwalka igu beeray”.
“Waxay taasi keentay in culeys aan nolosheyda i fuulin aan dareemo,” ayay sii raacisay hadalkeeda.
Michelle Obama ayaa marar badan madaxweyne Trump ku dhaliishay waxyaabo dhowr ah oo ay kamid tahay hadalkii uu ka sheegay xildhibaano ay ku jirto Ilhaan Cumar ee ahaa in ay dib ugu laabtaan halkii ay ka yimaadeen, haddii ay doonayaan in ay wax qabtaanna dalalka ay asal ahaan kasoo jeedaan ay wax u qabtaan.
Michelle oo marwada koowaad ee Mareykanka ahayd muddo sideed sano ah ayaa seygeeda waxaa uu sidoo kale dhaliilo u jeediyay xukuumadda Trump, kuwaas oo ay kamid yihiin sida loola tacaalay xanuunka corona iyo dhibaatada heysata dadka madowga ah.